Hadaladii Uu Ku XANTAY Zidane Ee Cadhadu Ka Muuqatay, Qosolkii Marcelo Iyo Modric Oo La Fadhiyay & Isco Oo Dareenka Dhabta Ah Ee Uu Zidane U Qabo Caddeeyay – Laacibnet.net
Hadaladii Uu Ku XANTAY Zidane Ee Cadhadu Ka Muuqatay, Qosolkii Marcelo Iyo Modric Oo La Fadhiyay & Isco Oo Dareenka Dhabta Ah Ee Uu Zidane U Qabo Caddeeyay
Kahor kulankii El-Clasico ee dhex maray kooxaha Real Madrid iyo Barcelona Sabtidii, kanaalka ree Spain ee Movistar+ kaamerooyinkiisa ayaa qabtay xiddiga Real ee Isco oo ka hadlaya xidhiidhka ka dhaxeeya isaga iyo macalinkiisa tababare Zinadine Zidane.
Isco ayaa la arkay isaga oo kursiga keydka fadhiya ciyaartii Camp Nou ee ay kooxdiisu guusha weyn soo gaadhay waxaana uu ka cabanayay sida uu tababarihiisa ula dhaqmo marka ay wakhti ciyaareedkiisa noqoto.
Sawirada laga qabtay daqiiqadahaas ayaa muujinaya Isco oo la hadlaya qaar kamida xiddigaha ay isku kooxda yihiin oo ay kamid yihiin Luka Modric iyo Marcelo Vieira.
Isco ayaa sheegaya inta ay kaameradu hayso in haddiiba Zidane uu isaga kulanka bedel kusoo gelinayo uu daqiiqada 80-aad gelin doono halka kulamada uu shaxda kusoo bilaabana uu bedelo daqiiqada 60-aad, 50-aad amaba wakhtiga nasashada.
“Haddii uu i bedelayo waa daqiiqada 60-aad ama 50-aad ee kulanka, mararka qaar wakhtiga nasashada, haddii uu isoo gelinayo waa daqiiqada 80-aad” ayuu yidhi xiddigii hore ee Malaga.
Erayada Isco ayaa dhaliyay in daafaca ree Brazil ee Marcelo oo la fadhiyay uu aad u qoslay halka Modric oo kamid ahaa xiddigihii shabaqa gaadhay kulankaasi uu kaliya dhoola-caddeeyay.
Isco ayaa u muuqda mid aad ugu dhibtoonaya inuu fursado badan ka helo Zidane waxaana uu toddoba kulan oo ay horyaalka La Liga kooxdiisu ciyaartay kusoo bilawday labadii kulan ee Real Valladolid iyo Cadiz.
Kulankii Valladolid ee bishii hore ayaa daqiiqadii 57-aad ee kulanka uu bedel kusoo saaray Zidane halka ciyaartii ay guuldarrada lama filaanka ah kala kulmeen Cadiz wakhtigii nasashada kaddib uusan garoonka kusoo noqon.
Warar xan ah ayaa sheegaya in Isco uu ka dareen qaatay bixitaankii James Rodriguez oo cadaadis badan uu ku hayay Zidane balse haatan hormood u ah Everton oo qaab cajiib ah ku bilaabatay xilli ciyaareedka Premier League.